I-GNOME 40 iza ku-Ubuntu 21.10, kwaye idokodo lihlala ngasekhohlo | Ubunlog
I-GNOME 40 iza ku-Ubuntu 21.10, kwaye idokodo lihlala ngasekhohlo
Kwinyanga nje edlulileyo sabhala inqaku esichaze kulo ukuba lisetyenziswa njani GNOME 40 kuhlobo oluzinzileyo lukaBuntu. Kwakungacetyiswanga, kodwa inokufakwa kwaye unokubona ukuba inguqulelo yamva nje yeGNOME ilungele njani uHirsute Hippo. Into esinokuyisebenzisa xa sifaka ezo phakheji ziyafana kakhulu noko sikubonayo kwiFedora, kodwa kubonakala ngathi iCanonical izakuya ngenye indlela, leyo ndingayithandiyo ngokobuqu.
Ndingumsebenzisi we KDE owonwabileyo. Kwilaptop yam ebalaseleyo ndisebenzisa uKubuntu, nakwenye iManjaro KDE ethe kratya, kodwa kweyona inamandla ndinomatshini oqinisekileyo onenguqulelo yophuhliso Ubuntu ukubona ukuba loluphi utshintsho abalubandakanyayo kunye nokunika ingxelo ngazo. Akukho nanye endisebenzeleyo namhlanje, kuba ndivule umatshini obonakalayo kwaye khange ndikwazi ukubona ukuba yeyiphi imizuzu kamva li papashwe OMG! Ubuntu! Yakha isindululo Sele isebenzisa i-GNOME 40, okanye i-GNOME 40.2.0 ukuba ichane ngakumbi.
Ubuntu be-GNOME 40 bohlukile kwiManjaro okanye kwiFedora
Ukuze ukwazi ukubona umfanekiso we-Ubuntu 21.10 nge-GNOME 40 Kuya kufuneka silinde utshintsho ukufika kwiDaily Build. Kwi-OMG! Ubuntu! ewe kukho izikrini, kwaye siyabona ukuba iCanonical igqibe njani ngekamva labo Ubuntu.
Njengakwezinye iinkqubo ezine-GNOME 40, inkqubo iqala ngokujonga imisebenzi, kodwa ngoyena ndoqo ubaluleke kakhulu itheko lihlala ngasekhohlo kwaye iyaqhubeka nokuhlala kuyo yonke indawo ethe nkqo. Ngaphandle koko, izimbo zomzimba ziyafana kwaye ziyafumaneka kuphela kwiWayland. Ukuswayipha ngeminwe emithathu siza kungena kwidesktops ebonakalayo, kwaye ukutyibilika kwakhona kuya kususa idrawer yesicelo. Ukutyibilika ecaleni singaya kwidesika enye ukuya kwenye.
Kucacile ukuba sithetha nge Yakha yonke imihla, kodwa ndingathanda ukuba asebenzise i-GNOME 40 njengoko bekucwangcisiwe, mhlawumbi ngumahluko wokuba idokodo lalibonakala ngalo lonke ixesha, kodwa nasezantsi. Kukho amarhe okuba Ubuntu 21.10 izakufika nge-GNOME 41, kodwa ngoku ndinamathandabuzo. Ngaba isigqibo seCanonical sokugcina idock ngasekhohlo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-GNOME 40 iza ku-Ubuntu 21.10, kwaye idokodo lihlala ngasekhohlo
Ewe ndiyayithanda. Enye yezona zinto zibalaseleyo zeBuntu. Ndityikitya ibha yecala.
UCarlos Peralta sitsho
Ngendikhethe ukuba bayigcine iGnome 40 phantse yentsusa, ndingavele ndiyitshintshe i-dock ehlala ibonakala ngaphantsi.
Phendula uCarlos Peralta
UVasili Ezeziel sitsho
Ndicinga ukuba kufana no "sayina" ka-Ubuntu. Ndiyayithanda kwicala lasekhohlo. Kwaye, ndinayo i-20.04 kwaye inokukhethwa ukuba ibekwe ngasekunene okanye ezantsi, kuxhomekeke kwintetho nganye ...
Phendula uVasili Ezeziel
Amakhonkco auch. Ist aus meiner Sicht die Einzug sinnvolle Position auf einem Monitor der mehr breit als hoch ist. Da zu glauben man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und die einzig richtige Variant vorzugehen wäre schon sehr vermessen
Ndiyayithanda ibha esecaleni efihlakeleyo ngelixa ndingayisebenzisi kuba ndiyilungiselele ngolu hlobo. Emva koko nganye inokuyilungiselela njengoko ifuna. Ndithatha ukuthanda i-Ubuntu GNOME desktop.
Ndicinga ukuba i-gnome kufuneka iphinde icinge uyilo lwayo, i-gnome 40 iyitshintshe kakubi; Ubuntu benza into ekugqibeleni elungileyo, ndiyakuxhasa Ubuntu 💗
Ndicinga ukuba banokwenza iDock ngeekona ezijikeleziweyo, njengeGnome 40 esemgangathweni, kodwa ukuyigcina ngasekhohlo kwaye ibonakale, iya kuba ilungile! Ayizukungathandabuzeki Ubuntu kwaye ijongeke njengangoku kwaye intle.
kukhangeleka ngathi iphelile kungekho dock ifumanekayo kwaphela kubuntu 21.10…
I-OFC sisiphene, emva kokuphuculwa 21.04 -> 21.10 idokodo lanyamalala kwaye andifumani ndlela yokuyibuyisa… Iya kubonakala kuphela xa ikwi «Imisebenzi»
Andiqinisekanga, kodwa mhlawumbi sisiphene. I-GNOME 40 ine-dock emazantsi, kodwa kuphela kwi «imisebenzi». ICanononicad igqibe kwelokuba iyigcine ngasekhohlo kwaye ibonakale. Ndinenguqulo yonjiniyela kwaye ndiyayibona. Kwi-YouTube, i-dock ihlala ikhona, nayo.
I-Pylint, faka esi sixhobo sohlalutyo lwekhowudi kwi-Ubuntu 20.04